Ahoana ny fampiasana AirDrop amin'ny iPhone, iPad ary Mac | iPhone News
Ahoana ny fampiasana AirDrop amin'ny iPhone, iPad ary Mac
Ignatius Room | | iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Raha manontany tena ianao ny fomba fampiasana airdrop, inona ireo fitaovana mifanentana, karazana rakitra inona no ahafahantsika mizara… tonga amin'ny toerana mety ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia handeha hamaha izany sy ny fanontaniana hafa mety ho mifandray amin'ny Apple teknolojia.
1 Inona no atao hoe AirDrop?
2 Inona no karazana rakitra halefa amin'ny AirDrop
3 AirDrop Requirements
4 Ahoana ny fametrahana AirDrop
6 Aiza no misy ny rakitra nozarain'i AirDrop
7 Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny iPhone sy Mac
8 Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny Mac sy iPhone
9 Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny iPhones roa
10 Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny Mac roa
Inona no atao hoe AirDrop?
AirDrop dia protocole handefasana rakitra eo amin'ny iPhone, iPad, iPod touch ary fitaovana Mac tompon'ny paoma izay mampiasa ny Wi-Fi sy Bluetooth fifandraisana amin'ny fitaovana ary tsy mila fifandraisana Internet.
Inona no karazana rakitra halefa amin'ny AirDrop
Miaraka amin'ny AirDrop dia afaka mizara izay karazana rakitra, na inona na inona habeny, na dia ny tena fampiasana azy dia ny hamindra sary avy amin'ny iphone ho mac sy ny mifamadika amin'izany.
Mba hampiasana AirDrop, ny Ny iPhone sy iPad dia tsy maintsy tantanin'ny iOS 8 farafaharatsiny na aoriana ary ho iray amin'ireto fitaovana manaraka ireto:
Raha mila mamindra votoaty eo amin'ny iPhone sy ny Mac, tsy maintsy tantanan'ny OS X 10.10 Yosemite ary ho iray amin'ireto modely manaraka ireto:
Raha toa ny iPhone na iPad anao tantanan'ny iOS 7, AirDrop ihany no azonao ampiasaina amin'ny fitaovana iOS hafa, tsy amin'ny Mac mihitsy.
AirDrop azo alaina ihany koa amin'ny OS X 10.7 Lion amin'ireto maodely Mac manaraka ireto fa mba hamindra rakitra amin'ny Mac roa ihany:
Mac Mini nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2010 sy aoriana
Tany am-boalohany 2009 Mac Pro miaraka amin'ny AirPort Extreme Card, Mid 2010 na aoriana.
Ny maodely MacBook Pro rehetra taorian'ny 2008 afa-tsy ny MacBook Pro 17-inch.
MacBook Air taorian'ny 2010 sy taty aoriana.
MacBooks navoaka taorian'ny 2008 na vao haingana ankoatry ny MacBook fotsy
iMac nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 sy aoriana
Ahoana ny fametrahana AirDrop
Apple dia mamela antsika hametraka AirDrop amin'ny fomba 3:
rehetra. Miaraka amin'ny safidy All, izay mpampiasa rehetra ao amin'ny tontolo iainantsika dia afaka mandefa karazana rakitra ho antsika.
Fifandraisana irery ihany. Amin'ny fampandehanana ity safidy ity dia tsy ho afaka handray rakitra avy amin'ireo mpampiasa izay notehirizinao tao amin'ny lisitry ny fifandraisanao ianao.
Tsy mandray ny fandraisana. Araka ny asehon'ity safidy ity dia tsy misy olona afaka mandefa karazana rakitra ho anao.
Raha te hisafidy amin'ireo maodely AirDrop 3 misy, dia tsy maintsy manao ny dingana izay asehoko anao eto ambany isika:
Izahay dia miditra amin'ny tontonana fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fanosehana ny rantsan-tànanao avy amin'ny ambony havanana amin'ny efijery.
Tsindrio izahay ary tazony ny kisary Wi-Fi.
dia tsindrio ary mihazona ny AirDrop
Farany, Mifidy ny fomba isika izay mifanaraka indrindra amin'ny filantsika.
Raha iPhone 8 na taloha ny fitaovanao, raha te hiditra amin'ny tontonana fanaraha-maso dia tsy maintsy swipe avy any ambany ka hatrany ambony ary araho ny dingana mitovy amin'ny etsy ambony.
Sambany izahay mizara votoaty amin'ny alàlan'ny AirDrop, ilay fitaovana handray ny atiny tsy maintsy hanaiky izany ianao.
Rehefa fantatsika hoe inona ny fitaovana misy AirDrop ary inona ny dikan-teny farany ambany indrindra amin'ny iOS sy OS X takiana amin'ny fitaovana tsirairay, tsy maintsy jerentsika ny manaraka:
Inona ilay olona tiantsika hizarana ny votoatiny akaiky na ao anatin'ny elanelana amin'ny tambajotra Wi-Fi izay ifandraisantsika na Bluetooth.
Ireo fitaovana roa ireo dia tsy maintsy manana navitrika ny fifandraisana roa. Raha toa ka mandeha ny Hotspot manokana ny iPhone-nao dia tsy mandeha ny AirDrop raha tsy vonoinao aloha.
Hamarino fa ny mpandray dia afaka ny fandraisana ny rakitra.
Raha tsy liana amin'ny fizarana ny antsipirian'ny fifandraisanao ianao dia angataho izy ireo mba hampavitrika AirDrop ho an'ny rehetra.
Aiza no misy ny rakitra nozarain'i AirDrop
Raha mahazo na mizara sary isika dia izany ho voatahiry ho azy ao amin'ny app Photos. Raha rohy izy io dia hisokatra ho azy amin'ny navigateur default amin'ny fitaovanay.
Rehefa mahazo rakitra isika dia ny fitaovana Hanontany antsika amin'izay fampiharana tiantsika hanokatra ilay rakitra, fampiharana izay hitehirizana ny rakitra.
Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny iPhone sy Mac
Raha mila mandefa sary na horonan-tsary amin'ny iPhone na Mac, tsy maintsy manaraka ireto dingana ireto isika:
Sokafy ny fampiharana Photos ary misafidy ny sary sy horonan-tsary rehetra izahay izay tiantsika hamindra amin'ny Mac.
Manaraka, tsindrio ny bokotra anjara, ary avy eo in AirDrop ary miandry isika mandra-piseho ny anaran'ny Mac antsika eo amin'ireo safidy aseho.
Mba handefasana ny atiny amin'ny Mac dia mila manao izany isika tsindrio ny anaran'ny Mac ary mipetraha miandry, indrindra raha be ny isan'ny sary sy video.
Raha rakitra voatahiry ao amin'ny fampiharana rehetra izany, dia tsy maintsy misafidy izany isika teo aloha, tsindrio ny bokotra Zarao > AirDrop > Anarana Mac
Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny Mac sy iPhone
Para mandefa rakitra avy amin'ny Mac mankany amin'ny iPhone na iPad, Hanatanteraka ny dingana izay hasehoko anao eto ambany izahay:
Apetrakay eo amin'ny rakitra tiana hozaraina ny totozy, ary kitiho ny bokotra ankavanan'ny totozy.
Manaraka, tsindrio ny safidy Zarao > AirDrop.
Farany, tsy maintsy manao izany isika avereno ny efijery amin'ny fitaovana iOS ho an'ny Mac hamantatra izany ary safidio ny fitaovana izay tiantsika handefasana azy.
Miankina amin'ny karazana rakitra alefanay amin'ny fitaovana iOS, dia hotehirizina ao amin'ny fampiharana Photos (raha sary na video), sary hanokatra ny navigateur izany (raha rohy), na Hanontany antsika amin'izay fampiharana tiantsika hanokafana azy io raha tsy rakitra amin'ny endrika eken'ny iOS.
Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny iPhones roa
Sokafy ny fampiharana Photos na misafidy ny rakitra izay tiantsika halefa amin'ny fitaovana iOS hafa.
Manaraka, tsindrio ny bokotra anjara, avy eo in airdop ary miandry mandra-piseho ny anaran'ny iPhone, iPad na iPod touch eo amin'ireo safidy aseho.
Farany, tsy maintsy manao izany isika tsindrio ny fitaovana izay tiantsika halefa ny rakitra.
Ahoana ny fampiasana AirDrop eo anelanelan'ny Mac roa
Farany, tsy maintsy manao izany isika safidio ny anaran'ny Mac izay tiantsika hizarana ny votoatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fampiasana AirDrop amin'ny iPhone, iPad ary Mac
Ny iPadOS 16 dia hitondra windows mitsingevana amin'ny fampiharana raha mifandray ny klavier ivelany
Nandositra ny fiarandalamby Apple Car ary mety tsy ho hitantsika mihitsy izany